आधुनिक विन्डोज फोन - यो बहु-समारोह उपकरणहरू एक साधारण डेस्कटप कम्प्युटर रूपमा लगभग एउटै अपरेटिङ सिस्टम सेट गरिएको छ जो माइक्रोसफ्ट, द्वारा देखि छ। Flagship "माइक्रोसफ्ट" स्मार्टफोन नोकिया Lumia, सबै बिक्री रेकर्ड भङ्ग र दृढता "स्याउ" उत्पादनहरु थिचिएको जो मानिन्छ। यो किनभने सबैलाई लघु मा एक नोटबुक छ चाहन्छ, अचम्मको छैन।
तर, यो लोकप्रियता भए तापनि समय समयमा "नोकिया Lyumiya" त्रुटि कोड 80070490. यो समस्या देखा विन्डोज सञ्चालन प्रणाली संग एक पीसी को मालिक पनि अक्सर यस्तो नम्बर "सेट" हेर्न देखि, जो कोहीले अचम्म छैन। यो समस्या कसरी समाधान गर्न बाहिर आंकडा प्रयास गर्नुहोस्।
त्रुटिहरू को कारण
अक्सर, त्रुटि कोड 80070490 निम्न अवस्थामा प्रदर्शित:
जब तपाईँले अनुप्रयोग स्टोरमा वा कार्यक्रम स्थापना को प्रक्रिया मा जाने प्रयास;
जब WhatsApp वा Viber जस्तै मोबाइल तत्काल दूत डाउनलोड।
यो अर्को मामला मा र मा, समस्या सामान्यतया Microsoft खाता वा गलत सञ्चालनको कमी को कारण हुन्छ। क्रमशः, अब आफ्नो फोनमा कोड 80070490 त्रुटि "माइक्रोसफ्ट" आफ्नो स्मार्टफोन संगत गर्न पर्याप्त देखिन्छन्। तर पहिले तपाईंले केही कदम पालना गर्न आवश्यक छ।
कारखाना सेटिङहरूमा फोन कसरी रिसेट गर्न
निर्माता को आधिकारिक वेबसाइट मा दर्ता गर्ने एक स्मार्टफोनको खरीद पछि तुरुन्तै निम्नानुसार पूरा गर्न एक जरूरी छ। प्रयोगकर्ता यसरी ज्यादा देखि ज्यादा एक टेलिफोन र त्रुटि कोड 80070490 को उद्भव संग समस्या बाट आफूलाई रक्षा गर्न सक्छन्।
निर्माता को आधिकारिक वेबसाइटमा आफ्नो फोन पुन: दर्ता गर्न, यो केही प्रारम्भिक manipulations गर्न आवश्यक छ:
को "सेटिङ" ट्याबमा फोनमा हेर्न र "यन्त्र जानकारी" पाउन।
यस खण्डमा, "रिसेट गर्नुहोस्।" चयन
कि फोन गरेपछि "Zeroed"। तर, यो मन मा सार्ने गर्नुपर्छ यो सबै डाटा मेटाउन हुनेछ, र विन्डोज फोन कारखाना सेटिङहरूमा फर्कन हुनेछ। त्यसैले यी कदम प्रदर्शन अघि हटाउन सकिने मिडिया सबै आफ्नो महत्त्वपूर्ण फाइलहरू, फोटो र फोन नम्बर प्रतिलिपि गर्न आवश्यक छ।
त्यसपछि तपाईंलाई मदत गर्नेछ जो दर्ता नै, सीधा जान सक्नुहुन्छ समस्या समाधान गर्न Lumia मा त्रुटि कोड 80070490 संग।
कसरी Microsoft मा खाता सिर्जना गर्न
निर्माता साइट मा दर्ता तपाईं धेरै तरिकामा जान सक्नुहुन्छ:
फोनमा। यो गर्न, "सेटिङ" जाने र फेला पार्न "मेल र खाता।" त्यसपछि तपाईं "सेवा थप्नुहोस्" र टिकटिक क्लिक गर्न आवश्यक "को Microsoft खाता।" त्यो रहिरहन्छ प्रोफाइल सिर्जना र आफ्नो स्मार्टफोनको स्क्रिन निर्देशनहरू पालना गर्न छ।
कम्प्युटरबाट। खुला, तपाईंको ब्राउजर र निर्माता को आधिकारिक साइट जाने यो गर्न। अर्को चरण मा मनिटर स्क्रिनमा देखिने जो सबै आवश्यक क्षेत्रहरू, भर्नुहोस्। 18 भन्दा बढी संख्या लेख्न (यो साँचो छैन भने पनि) राम्रो उमेर निर्दिष्ट गर्दा। तपाईं त्यो भन्दा कम राख्न भने त्यहाँ डाउनलोड र आवेदन स्थापना समस्या हुन सक्छ। सबै तयार छ, तिमी बस मा क्लिक गर्न "नयाँ खाता सिर्जना गर्नुहोस्" र निर्देशनहरू पालना गर्न आवश्यक छ।
प्रयोगकर्ता पहिले नै Xbox गेमिङ कन्सोल, वा मेल सर्भर हटमेल मार्फत दर्ता गरिएको छ जो माइक्रोसफ्ट, मा खाता छ भने, त्यसपछि अर्को खाता आवश्यक छैन सुरु गर्नुहोस्।
त्रुटि कोड 80070490 प्रदर्शित, र दर्ता पहिले नै फोन खरीद पछि पारेको छ भने, यो एक मात्र "रिसेट" सेटिङ रहनेछ।
अन्य "डिजिटल चेतावनी" विभिन्न आवेदन डाउनलोड को समयमा देखा पर्न सक्छन्।
यस मामला मा, कोड देखिने बाहेक, WhatsApp, Viber, र अन्य तत्काल दूत पहुँच छैन। साथै, प्रयोगकर्ता आफ्नो फोन अनुप्रयोगहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ।
यो समस्या समाधान गर्न, तपाईं हुनुपर्छ:
यदि फोनमा ठाउँ खाली छ हेर्नुहोस्। सायद उपकरण बस पर्याप्त स्मृति छैन। यस मामला मा, बस केही गीतहरू वा फोटो मेटाउन। यो स्मार्टफोनको सफ्टवेयर को उचित कामकाज लागि 100 एमबी आवश्यक छ।
को अल्ट्रासोनिक "माइक्रोसफ्ट" समक्रमण र सही मिति र समय विन्डोज फोन सेट छन् कि जाँच गर्न प्रयास गर्नुहोस्।
एक वायरलेस पहुँच बिन्दु जडान गर्न एक स्मार्टफोन वा मोबाइल इन्टरनेटमा चलाउनुहोस्। त्यसपछि तपाईंले आफ्नो इमेल ठेगाना टाइप, mail.live.com जानुहोस् र खाता सिर्जना गर्न आवश्यक छ।
यी अपरेसन कुनै पनि परिणाम उत्पादन छैन, यदि र त्रुटिहरू अझै पनि देखा पर्न जारी, तपाईं माथि वर्णन रूपमा, सेटिङ रिसेट गर्न आवश्यक छ।
त्रुटि कोड 80070490, नोकिया Lumia गर्न साथै अक्सर अन्य गल्तीलाई छ। त्यहाँ एक लेखिएको 805a8011 स्क्रिन थियो भने, यो बजार जडान गर्दा प्रमाणीकरण असफल संकेत हुन सक्छ।
नेटवर्क जडान जाँच गर्नुहोस्। तपाईं वाइफाइ प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने, यो अर्को पहुँच बिन्दु स्विच गर्न प्रयास गर्न, वा मोबाइल इन्टरनेट मार्फत अनलाइन जाने आवश्यक छ।
आफ्नो फोन सेट समय क्षेत्र जाँच गर्नुहोस्।
पूर्ण "माइक्रोसफ्ट" खातामा व्यक्तिगत जानकारी भरिएको कि स्पष्ट। माइक्रोसफ्ट समय समयमा प्रयोगकर्ता द्वारा प्रदान जानकारी विशुद्धता जाँच भन्ने तथ्यलाई। यदि केही क्षेत्रहरू भरिएको छैन, प्रोफाइल अस्थायी रूपमा सुरक्षाको कारण अवरुद्ध हुन सक्छ।
एकाइ पुनः लोड गर्नुहोस्। यसरी यो एक केहि सेकेन्ड स्मार्टफोन ब्याट्री बाहिर लिन राम्रो छ। त्यसपछि तपाईं ठाँउ यसलाई फिर्ता राख्नु र फेरि एकाइ अन गर्न आवश्यक छ।
"प्रकाश राहत" सेटिङहरू उत्पादन। यो गर्न, एक साथ "+" भोल्युम र पावर बटन मा बटन मा छ फोनमा तल पकड र यो 10 सेकेन्ड पकड। एक पटक कम्पन ट्रिगर, तपाईं बटन जारी र सिस्टम पूर्ण रूपमा लोड नभएसम्म प्रतीक्षा गर्न सक्नुहुन्छ। यस मामला मा, डाटा सुरक्षा चिन्ता गर्न आवश्यक छैन। यो प्रक्रिया तस्बिर, संगीत र अन्य फाइलहरू मेटाउन छैन।
त्रुटिहरू 80188d1 र 80188d2
यस मामला मा, समस्या सायद तपाईंको फोन सफ्टवेयर अद्यावधिक प्रक्रिया मा एक विफलता थियो भन्ने तथ्यलाई मा निहित। यो एक एकदम साधारण समस्या छ। यसलाई समाधान गर्न, तपाईं स्मार्टफोन एक रिसेट प्रदर्शन र मार्गदर्शन मोडमा अद्यावधिक सफ्टवेयर स्थापना गर्न प्रयास गर्न आवश्यक छ। पनि लायक बाहिर भाइरस विन्डोज फोन जाँच।
यदि समस्या सुलझाने लागि यी विधिहरू सबै मदत छैन, त्यसपछि, सम्भवत, त्यहाँ सिस्टम मा एक अपरिवर्तनीय विफलता थियो। यस मामला मा, हामी मात्र सेवा केन्द्र कर्मचारी को व्यावसायिकता मा आशा गर्न सक्छौं।
फोन "नोकिया 225": समीक्षा, फोटो र विशेषताहरु
सेल फोन "नोकिया 6500" (नोकिया): एक अवलोकन, विनिर्देशों, समीक्षा
"ब्ल्याकबेरी" के हो? मोबाइल फोन ब्ल्याकबेरी: समीक्षा, मूल्यहरू
नोकिया 625 स्मार्टफोन छोटकरीमा
कसरी रूपमा कुशलतापूर्वक सकेसम्म खेल "2048" पारित गर्न?
ब्रूक्स अलेक्जेन्डर वी .: जीवनी र कम्पनी को अध्यक्ष को गतिविधिहरु "Morton"
दबाइ 'एन्टिस्टिन'। प्रयोगको लागि निर्देशन
अन्ना Tsukanova: जीवनी र फोटो
ढिलाइ महिनावारी को दर के हो?
Deniel Redkliff: चलचित्रहरू र भूमिकाको
"परभक्षी को लिग": Corky। हाइड मेकानिक्स
आफ्नो हातमा धातु बाट स्विङ: आफ्नो निर्माण प्रक्रिया को एक सरल विवरण
कम्पाउन्ड वाक्य, यसको संरचना र अर्थ